Shaqo la'aanta Minnesota iyo sida loo xareeyo si loo ururiyo faa'iidooyinkaaga -
Bogga ugu weyn Shaqo la'aanta Minnesota iyo sida loo xareeyo si loo ururiyo faa'iidooyinkaaga
isha sawirka: lawhelp
Shaqaalaha sida ku meel gaadhka ah shaqada uga maqan ee aanay jirin wax khalad ah oo ay iyagu iska leeyihiin gudaha Minnesota, sida gobol kasta oo kale, waxa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan magdhowga shaqo la'aanta. Gobol gobol, shuruucda u-qalmitaanka, shuruudaha dakhligii hore, heerarka dheefaha, iyo waxyaabo kale oo gaar ah ayaa kala duwan. Waxaan eegi doonaa shaqo la'aanta Minnesota iyo sida loo codsado manfacyada shaqo la'aanta ee gobolka.
Waa maxay Caymiska Shaqala'aanta (UI)?
Inkasta oo caymiska shaqala'aanta uu yahay sharci federaal ah, gobol kastaa wuxuu maamulaa barnaamijkiisa. Shaqaaluhu waa inay u hoggaansamaan dhammaan shuruudaha shaqada iyo mushaharka ee uu dhigay gobolkooda, oo ay ku jiraan wakhtiga la shaqeeyay. Dawlad goboleedyada ayaa ugu horrayn mas'uul ka ah bixinta manfacyada, kuwaas oo lagu taageerayo canshuuraha mushaar bixinta ee loo ururiyay ujeedadaas.
Intii lagu jiray dillaaca coronavirus, dawladda federaalku waxay dejisay qodobo lagu caawinayo dadka shaqo la'aanta ah ee Mareykanka. Ka dib markii Madaxweyne Donald Trump uu saxiixay Sharciga Gargaarka, Gargaarka, iyo Amniga Dhaqaalaha (CARES) ee Coronavirus Maarso 2020, faa'iidooyinkan dheeriga ah ayaa noqday kuwo waxtar leh.
Waxa la kordhiyay ka dib markii la ansixiyay Xeerka Isku-dhafka ah ee 2021, waxaana mar labaad la kordhiyay March 11, 2021, markii Madaxweyne Joe Biden uu saxiixay $1.9 tiriliyan Xeerka Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka ee 2021. Faa'iidooyinka dheeraadka ah ayaa dhammaaday Sebtembar 6, 2021.
Akhri: Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta New York
Fahamka Caymiska Shaqala'aanta (UI)
Dawlad-goboleedyo gaar ah iyo dawladda federaalku waxay iska kaashadaan hindisaha shaqo la'aanta. Caymiska shaqala'aanta ayaa siiya gunno lacageed dadka shaqo la'aanta ah ee si firfircoon shaqo u raadsada.
Sharciga Canshuurta Shaqala'aanta ee Federaalka (FUTA) iyo wakaaladaha shaqada ee gobolka ayaa bixiya magdhow shaqaalaha aan shaqayn ee u qalma.
Inkasta oo gobol kastaa leeyahay nidaamka caymiska shaqo la'aanta, dhammaan gobollada waxaa looga baahan yahay sharciga federaalka inay raacaan mabaadi'da qaarkood. Faa'iidooyinka shaqo la'aantu waxay ku badan yihiin dhammaan khadadka gobolka sida uu qabo sharciga federaalka.
Barnaamijka waxaa kormeera Waaxda Shaqada ee Mareykanka, taasoo hubisa u hoggaansanaanta gobol kasta.
Shaqaalaha buuxiya shuruudaha qaarkood waxay xaq u yeelan karaan ilaa 26 toddobaad oo faa'iidooyin sannadkii. Lacagta caddaanka ah ee toddobaadlaha ah waxaa loogu talagalay in lagu beddelo, celcelis ahaan, qayb ka mid ah dakhliga caadiga ah ee shaqaalaha. Canshuuraha loo shaqeeyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo caymiska shaqo la'aanta ee gobolada intooda badan.
Inta badan loo shaqeeyayaasha ayaa bixin doona canshuurta FUTA ee heer federaal iyo heer gobol labadaba. 501(c)3 urur ayaa laga dhaafay cashuurta FUTA.
Caymiska Shaqala'aanta Minnesota
Barnaamijka Caymiska Shaqala'aanta ee Minnesota (UI) wuxuu bixiyaa beddelka dakhliga qayb ahaan ku meel gaadhka ah ee shaqaalaha shaqada laga fadhiisiyo iyada oo aanay jirin wax khalad ah oo ay iyagu leeyihiin.
Waqtiyada qalalaasaha dhaqaale, waxay u shaqeysaa sidii xasiliye iyo kicin, ka caawinta loo-shaqeeyayaasha inay joogteeyaan shaqaale tababaran.
U-qalmitaanka Shaqo La'aanta ee Minnesota
Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha (DEED) ee Minnesota ayaa mas'uul ka ah magdhowga shaqo la'aanta waxayna go'aan ka gaartaa u-qalmitaanka xaalad kasta.
Si aad u hesho dheefaha shaqo la'aanta ee Minnesota, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Shuruudaha dakhliga ugu yar waa in la buuxiyaa waqtiyadii hore.
Marka loo eego sharciga Minnesota, waa in aad shaqo la'aan tahay iyada oo aysan jirin khalad adiga kuu gaar ah.
Waa inaad karti u yeelataa oo aad diyaar u tahay, iyo sidoo kale inaad si firfircoon shaqo u raadsato.
Akhri: Waa Maxay Caymiska Shaqo La'aanta Iyo Sida Loo Gudbiyo NJ
Xeerarka lagu codsado caymiska shaqo la'aanta
Haddii aadan hubin inaad awood u yeelan doonto inaad shaqo hesho, waa inaad dalbataa. Waxaa jira saddex xeer oo waaweyn, inkastoo ay jiraan kuwa kale.
1. Waa in aad shaqadaadii ku wayday duruufo ka baxsan xakamayntaada.
Guud ahaan, tani waxay la macno tahay in haddii aad shaqada ka tagto ama lagaa saaro, aadan xaq u yeelan doonin faa'iidooyinka shaqo la'aanta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo gaar ah. Sababaha hoos ku taxan dartood, waxa laga yaabaa inaad weli xaq u yeelato manfacyada shaqo la'aanta. Waa inaad dalbataa xitaa haddii aadan hubin.
Ma lagaa fadhiisiyey
Saacadahaaga shaqo ma la dhimay?
Ma uga tagtay shaqadaada sababtoo ah waxay ahayd khatar, ama sababtoo ah waxaa lagugu hanjabay ama lagu dhaawacay?
Ma u tagtay sababtoo ah ma aad heli karin fasax xanuun qoys ama xaalad degdeg ah awgeed?
Miyaad ka tagtaa shaqadaada ama ma lagaa ceyriyaa sababtoo ah caafimaadkaaga maskaxeed ama jireed ayaa xumaaday?
Miyay adag tahay inaad shaqada timaado sababtoo ah kormeerahaagu wuxuu bedelay magdhowga, jadwalka, ama saacadahaaga?
Ma caafimaad qabtaa ama ma dhaawacantay, taasina waxay kugu adkaynaysay shaqada? Ma jiray qof xanuunsan ama dhaawacmay oo qoyskaaga ah?
Miyaad lumisay fursad aad ku hesho xannaano-maalmeed ama gaadiid? Miyaa lagu dhibay ama laguula dhaqmay si xaq darro ah madaxaaga ama asxaabtaada?
2. Waa inaad hadda raadisaa shaqo markii aad lumisay shaqadaada.
Ula dhaqan ugaarsigaaga shaqada sidii inay tahay shaqo waqti-buuxa ah. Ugu yaraan 30 saacadood todobaadkii waa in lagu qaataa ugaarsiga shaqo cusub. La soco meelaha aad shaqo ka raadsato.
Akhri: Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Texas
3. Ka dib marka aad lumiso shaqadaada, waa inaad awood u leedahay inaad shaqeyso oo aad diyaar u tahay inaad shaqeyso.
Waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin haddii aad qabto dhibaatooyin caafimaad ama waajibaad (sida waxbarashada) oo kaa horjoogsanaya inaad shaqo raadsato ama shaqeyso.
Ma Buuxisay Shuruudaha Dakhliga Ugu Yar?
Si loo xisaabiyo u-qalmitaankaaga shaqo la'aanta, ku dhawaad ​​dhammaan goboladu waxay eegaan taariikhdaada shaqo ee dhow iyo mushaharka inta lagu jiro hal sano "muddada aasaasiga ah."
Muddada saldhiga ee Minnesota waa afartii rubuca kalandarka ee ugu dambeeyay ama afartii ugu horeeysay ee shanta rubuc kalandarka ka hor inta aadan buuxin codsigaaga dheefaha.
Waa inaad kasbatay ugu yaraan 5.3 boqolkiiba celceliska mushaharka sanadlaha ah ee gobolka oo dhan (oo lagu soo koobay ilaa $100 ee soo socda) inta lagu jiro xilliga aasaasiga ah.
Qadarka iyo Muddada Dheefaha Shaqo La'aanta ee Minnesota
Qadarka faa'iidadaada toddobaadlaha waxaa go'aamiya DEED. Inta lagu jiro xilliga aasaasiga ah, qaddarka faa'iidadaada toddobaadlaha ah waxay noqon doontaa qiyaastii 50% celceliska mushaharkaaga toddobaadlaha ah, ilaa ugu badnaan taas oo kala duwan sannad kasta iyadoo lagu saleynayo celceliska mushaharka toddobaadlaha ee gobolka. (Qaybtii hore ee 2021, ugu badnaan wuxuu ahaa $762.)
Inta badan, dheefaha waxaa la bixiyaa ilaa 26 toddobaad. Ku xidh faahfaahintaada qiyaasaha dheefaha DEED si aad u heshid fikrad ah inta ay noqon karto faa'iidadaada toddobaadlaha ah.
Sida Loo xareeyo Macaashka Shaqo La'aanta ee Minnesota
Si aad u codsato dheefaha shaqo la'aanta ee Minnesota, buuxi arji bogga Caymiska Shaqala'aanta ee Minnesota (guji "Codsadayaasha" ka dibna "Codso Dheefaha) ama wac 651-296-3644 (Twin Cities call area); 1-877-898-9090 (ka baxsan aagga wicitaanka ee Magaalooyinka Mataanaha); 1-866-814-1252 maalinta ugu horeysa ee aad shaqo la'aan tahay ama saacadahaaga shaqada ayaa si weyn hoos loogu dhigay (TTY ee maqalka naafada ah).
Akhri: Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Oregon 2021
Sida Racfaan looga qaato Diidmada Faa'iidooyinka Shaqo La'aanta ee Minnesota
Haddii dacwadaada shaqo la'aanta la diido, waxaad haysataa 20 maalmood oo aad ku xerayso rafcaan ka dib markaad hesho ogeysiinta diidmada. Waxaad rafcaan ku soo diri kartaa boostada, fakiska, ama onlayn (adiga oo gelaya akoonkaaga DEED). Dhagaysi ayaa loo muddeeyay in lagu dhagaysto caddaymahaaga iyo cida aad u shaqayso labadaba. Dhageysiga, oo sida caadiga ah lagu qabto taleefanka, waxaa qaadi doona Garsooraha Sharciga Shaqo La'aanta (ULJ), kaas oo bixin doona xukun qoraal ah.
Waxaad xareyn kartaa Codsiga Dib-u-fiirinta haddii aadan ku raacsanayn go'aanka ULJ. Haddii aadan ku faraxsanayn natiijada, waxaad racfaan ka qaadan kartaa Maxkamadda Racfaanka ee Minnesota.
Ma shaqayn karaa inta aan helayo manfacyada shaqo la'aanta?
Waxaad shaqayn kartaa wakhti-dhiman markaad qaadanayso manfacyada shaqo la'aanta, laakiin qadarka mushaharkaaga waxa laga jarayaa dheefahaaga. Sida soo socota waa sida ay u shaqeyso:
Waxa laga yaabaa inaad u qalanto qayb lacag bixin ah haddii aad shaqeyso in ka yar 32 saacadood todobaadkii AMA haddii saacadaha shaqadaada laga dhigay wax ka yar 32 saacadood todobaadkii oo aad hadda hesho wax ka yar gunnadaada shaqo la'aanta toddobaadlaha ah.
Haddii aad shaqeyso 32 saacadood ama ka badan todobaadkii, ama haddii dakhligaaga guud ee toddobaadlaha ah uu la mid yahay ama ka badan yahay lacagtaada shaqo la'aanta toddobaadlaha ah, ma aad u yeelan doontid shaqo la'aan usbuucaas.
Waa inaad u sheegtaa dhammaan dakhligaaga iyo ilaha kale ee dakhliga Xafiiska Shaqo la'aanta. Ka warbixi dhammaan dakhligaaga, oo ay ku jiraan kuwa ku-meel-gaadhka ah ama kuwa wakhti-dhiman ah. Xitaa haddii aad aaminsan tahay in Xafiiska Shaqo la'aantu uu hore u yaqaan shaqada, soo sheeg mushaharka.
Waxaa lagu siin doonaa lacag dheeraad ah haddii aadan soo gudbin dhammaan dakhligaaga ama dakhliga kale. Waa inaad u soo celisaa lacagta dheeraadka ah, oo ay la socoto dulsaarka, Xafiiska Shaqo la'aanta. Waxaa jirta fursad aad sidoo kale ku bixin doonto ganaax lacageed.
Uruurinta Shaqo La'aanta Ka Dib Shaqo Joojin
Haddii shaqada lagaa fariisiyay, aad shaqada ku wayday hoos u dhac dhaqaale (RIF), ama lagu "hoosay" sababo dhaqaale, waxaad buuxin doontaa shuruudahan.
Uruurinta Shaqo La'aanta Kadib Markii La Eryo
Haddii shaqada lagaa eryo sababtoo ah waxaa ka maqan awoodihii lagama maarmaanka ahaa ama aadan ku habboonayn booska, waxaa laga yaabaa inaad weli xaq u leedahay dheefaha. Tusaale ahaan, haddii shaqada lagaa eryo inkasta oo aad samaysay dadaal cadaalad ah sababtoo ah waxaad ahayd qof aan waxtar lahayn ama khaladaad daacad ah ka gashay shaqada, waxaad weli xaq u yeelan doontaa dheefaha shaqo la'aanta.
Xaq uma yeelan doontid faa'iidooyinka shaqo la'aanta haddii hawlahaaga loo tixgeliyo "anshax-xumo." Anshax-xumada Minnesota waxaa lagu qeexaa dhaqan kasta oo ujeedo leh ama aan laga fiirsan oo muujinaya tixgelin la'aan weyn oo xagga shaqada ah ama xad-gudub halis ah xeerarka loo-shaqeeyaha uu si macquul ah uga filayo shaqaalaha. Kuwa soo socda waa tusaaleyaal dhaqan xumo:
Inta badan soo daaha ama la waayo cudurdaar la'aan
u muujinta shaqada marka ay hooseyso maandooriyaha ama khamriga,
taasoo ka soo horjeeda siyaasadda shirkadaha.
si ula kac ah ugu guul darreystay fulinta waajibaadka shaqo
Xatooyo, weerar, ama dhaqan kadeedis dhamaantood waa mamnuuc.
Uruurinta Shaqo La'aanta Kadib Joojinta
Haddii aad shaqadaada ka tagto sabab la'aan, xaq uma yeelan doontid lacagta shaqo la'aanta. Guud ahaan, shuruudaha sababta wanaagsan ayaa la buuxin doonaa haddii ay tahay inaad guurto sababtoo ah xaaskaaga/saygaaga waxay heshay shaqo cusub, haddii aad u baahan tahay inaad ka tagto si aad u daryeesho xubin qoyska ka mid ah oo si xun u xanuunsan, ama haddii aad u carartay inaad ka cararto xadgudubka guriga.
Akhri: Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Wisconsin 2021
Ma Jirtaa oo si Firfircoon Shaqo Ma u Raadinaysaa?
Si aad u sii haysato dheefahaaga shaqo la'aanta, waa inaad awood u yeelataa inaad shaqeyso, diyaar u tahay inaad shaqo qabato, oo aad si firfircoon u raadiso shaqo. Waa in aad qaadatid boos ku habboon haddii laguu soo bandhigo.
Shaqadu waa ku habboon tahay haddii ay si macquul ah u khusayso shahaadooyinkaaga iyo haddii saacadaha, mushaharka, masaafada iyo xaaladaha kale ee shaqada ay yihiin kuwa caadiga ah ee goobtaada.
Si kastaba ha ahaatee, mar kasta oo aad shaqeyso, waa in badan oo aad diyaar u tahay inaad aqbasho shaqo u baahan karti yar ama dakhli yar.
Inta badan, waa inaad samaysaa shaqo raadin wanaagsan toddobaad kasta. La soco hawlaha shaqo raadintaada, oo ay ku jiraan loo-shaqeeyayaasha aad la xiriirtay, taariikhaha aad la xiriirtay, iyo natiijooyinka.
Si loo xaqiijiyo dadaalkaaga, DEED waxa laga yaabaa inay soo wacdo adiga ama xidhiidhada loo-shaqeeyahaaga.
Waa maxay Caawinta Shaqo La'aanta Musiibada?
Shakhsiyaadka shaqadoodii ku waayey natiijada tooska ah ee masiibada uu Madaxweynuhu ku dhawaaqay waxay xaq u leeyihiin magdhowga shaqo la'aanta sida hoos timaada barnaamijka Kaalmada Shaqala'aanta Musiibada (DUA).
Yaa u qalma Kaalmada Shaqo la'aanta Musiibada?
Shaqadaada ama iskaa u shaqeysiga waa in ay luntay ama la carqaladeeyay natiijada tooska ah ee masiibo weyn oo uu ku dhawaaqay Madaxweynaha Mareykanka si uu ugu qalmo faa'iidadan.
Waa in lagu caddeeyey inaadan u qalmin manfacyada shaqo la'aanta caadiga ah (marka la eego sharciga gobolka ama federaalka).
Mushaharka waa in la siiyaa shaqaalaha shaqo la'aanta ah ee ku waayay shaqadiisa ama iyada oo ay sabab u tahay masiibo weyn oo uu Madaxweynuhu magacaabay:
Aan awoodin inay tagaan goobtooda shaqada.
Burbur soo gaaray goobta shaqada awgeed, ma awoodo inaan shaqeeyo.
Sababtoo ah odaygii hore ee reerka ayaa ku baaba’ay masiibada dhacday, waxa uu noqday madaxa qoyska oo shaqo raadis ah.
Ma shaqayn karo sababtoo ah dhaawac musiibo gaadhay.
Sideen u codsadaa Kaalmada Shaqo La'aanta Musiibada?
Gobolka ay dhibaatadu saameysey ayaa soo saari doonta ogeysiisyo ku saabsan helitaanka Kaalmada Shaqo la'aanta Musiibada marka ay dhacdo musiibo. Shakhsiyaadka shaqadoodii ku waayay natiijada tooska ah ee masiibada waa inay la xidhiidhaan wakaalada caymiska shaqala'aanta ee gobolkooda si ay u xareeyaan cabasho.
Shakhsiyaadka u guuray gobol kale ama laga saaray waa inay la xidhiidhaan wakaalada gobolka.
Dadku waa inay ku codsadaan Kaalmada Shaqala'aanta Musiibada (DUA) 30 maalmood gudahooda ka dib marka uu gobolku ku dhawaaqo in la heli karo barnaamijka.
Shakhsiyaadka waa in ay raacaan tilmaamaha ku jira ogeysiiska oo ay ka codsadaan DUA iyaga oo isticmaalaya hababka xaraynta ee gobolka (tusaale ahaan, qof ahaan, boostada, telefoon ahaan, internetka, iwm.).
Akhri: 20 Shaqooyin Oo Sanadkiiba Bixiya $ 100k $ 2021k Iyadoo Aan Lahayn Shahaado XNUMX
Sidee ayuu caymiska shaqo la'aanta MN u shaqeeyaa?
Caymiska shaqala'aanta ayaa magdhow siiya shaqaalaha shaqadoodii ku waayay wax khalad ah oo ay iyagu sameeyeen. Canshuuraha loo shaqeeyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo faa'iidooyinka. Loo-shaqeeyayaasha: Haddii aad leedahay shaqaale uu ilaalinayo sharciga caymiska shaqala'aanta ee Minnesota, waa inaad samaysaa akoon shaqo-bixiye.
Canshuurta ma laga saaray shaqo la'aanta Minnesota?
Marka loo eego sharciga federaalka iyo gobolka Minnesota, faa'iidooyinka shaqo la'aantu waa dakhli la canshuuri karo. Gal akoonkaaga onlaynka ah www.uimn.org ama isticmaal nidaamka taleefoonka ee iswada si aad u codsato, u tirtirto, ama wax uga badasho haynta cashuurta dakhliga.
Maxaa kaa diidaya shaqo la'aanta MN?
Awood la'aanta in la buuxiyo heerarka waxqabadka loo shaqeeyaha. Khaladaadka caadiga ah ama shilalka ma aha taxadir la'aan ama dayacaad. Waxqabad la'aan. Khaladaadka daacadda ah ama wax laga tago.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in MN loo ogolaado shaqo la'aanta?
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in laga shaqeeyo dacwadaha shaqo la'aanta oo la helo lacag? Lacag-bixinta waxaa lagu oggolaaday hal toddobaad gudaheed dadka badankooda ee codsada faa'iidooyinka shaqo la'aanta, soo gudbiya codsi lacag-bixineed, oo buuxiya dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka. Marka loo eego DEED, waxay u dhacdaa si degdeg ah xaalado badan.
Ma ka dalban karaa shaqo la'aanta telefoonkayga?
Si aad u hesho faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta, waxaad u baahan tahay inaad cabasho ka xarayso barnaamijka caymiska shaqo la'aanta ee gobolka aad ka shaqeysay. Iyadoo ku xiran gobolka, dacwadaha waxaa lagu xareyn karaa qof ahaan, telefoon, ama online.
Waa maxay faa'iidada ugu badan ee shaqo la'aanta Minnesota?
Intee in le'eg ayaan heli doonaa? Qadarka faa'idada toddobaadlaha waa qiyaastii 50 boqolkiiba celceliska mushaharkaaga toddobaadlaha ilaa ugu badnaan gobolka oo ah $762. Waxaan boostada kuugu soo diri doonaa Go'aaminta Koontada Dheefta taasoo tuseysa qaddarka faa'iidadaada toddobaadlaha ah iyo wadarta cadadka faa'iidooyinka la heli karo.
Sideen ku ogaan karaa in shaqo la'aantayda la oggolaaday?
Raad-raacista heerka sheegashadaada inta badan way fududahay sida daawashada sheegashadaada onlayn ama wac xafiiska shaqo la'aanta ee gobolkaaga. … Ugu dambayntii, gobolkaagu wuxuu kugu ogeysiin doonaa warqad ku saabsan go'aanka sheegashada iyo tallaabo kasta oo kale oo lagaaga baahan yahay
Caymiska shaqala'aanta miyuu la mid yahay Pua?
Erayga Caawimada Shaqo La'aanta Faafa (PUA) waxa loola jeedaa barnaamij si ku meel gaadh ah u balaadhiyey caymiska shaqo la'aanta (UI) u qalmida dadka aan haddii kale u qalmin. Tan waxaa ku jiray shaqaale iskood u shaqeysta, madax-bannaanilayaal, qandaraaslayaal madax-bannaan, iyo shaqaale waqti-dhiman ah oo uu saameeyay cudurka faafa ee coronavirus.
Waa maxay faa'iidooyinka shaqo la'aantu?
Dheefta shaqo la'aanta waxay ku siinaysaa dakhli ku meel gaar ah marka aad shaqadaada ku weydo adiga oo aan khalad ahayn. Lacagtu waxay qayb ahaan beddeshaa dakhliga kaa lumay waxayna kaa caawinaysaa inaad bixiso kharashyada markaad raadinayso shaqo cusub. Faa'iidooyinka, laga helo cashuurta aad bixin jirtay loo-shaqeeyahaagi, kuma salaysna baahida dhaqaale. Inta aad qaadanayso manfacyada, shaqadaadu waa in aad shaqada ku soo noqoto sida ugu dhakhsaha badan.
Malaayiin Mareykan ah gaar ahaan intii lagu jiray xannibaadda ayaa ka faa'iideystey faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Minnesota.
Markaa, haddii aad ku nooshahay Minnesota oo aad xaq u leedahay manfacyada shaqo la'aanta, tani waxay ku tusi doontaa sida aad shaqo la'aanta uga xarayso Minnesota.
Maareeyaha Miisaaniyadda: Shaqooyinka, Mushaharka, Waxbarashada
Shaqooyinka ugu Fiican ee Tooska ah ee Ardayga Kulliyadda oo bixiya 15 Dollar Saacad kasta
Shaqooyinka Wax -barashada ugu Fiican ee Onlineka ah ee La Heli Karo 2021
20 Shaqooyin Oo Sanadkiiba Bixiya $ 100k $ 2021k Iyadoo Aan Lahayn Shahaado XNUMX
Dib u eegista Caymiska Nolosha ee Gumeysiga Penn 2021: Faa'iidooyinka & Qasaaraha | Sharci ama khiyaamo
17 -ka Shirkadood ee ugu Sareeya Saliidaha Nigeria 2021 | Rigs, Dakhli Iyo Networth
Nayjeeriya waa waddanka ugu dadka badan madow ee qorraxda hoosteeda ku jira oo aad ugu barakeeyey khayraadka dabiiciga ah ee Saliidda…
Haddii aad raadinayso sidii aad ku heli lahayd dakhli ka wanaagsan bishii, ka shaqaynta shaqooyinkan had iyo jeer waxay noqon doontaa…
Daqiiqad 18 akhri
Halbeegga caanka ah ee xaasidnimada maaliyadeed ee khadka tooska ah, Forbes, ayaa mar kale wadaagaysa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hantida…
21 Hustle Side Paying Side High for Designers Interior
Dhaqdhaqaaqa dhinaca naqshadeeyayaasha gudaha ama qurxintu kama joojinayso inay raacaan rabitaankooda, waa fursad...
Iyada oo leh shaqooyinka dhaqaalaha Gig uma baahnid inaad ka shaqeyso 9-5 si aad u noolaato, kaliya waxaad u baahan tahay…